ဆာသော်ဒိုး - ဆွေမျိုးစပ်ခြင်း - MoeMaKa Media
Home / Literature / Satire / Sir Thawdow / ဆာသော်ဒိုး - ဆွေမျိုးစပ်ခြင်း
ဆာသော်ဒိုး - ဆွေမျိုးစပ်ခြင်း
" ဟေး ယောက်ဖ . . . ဘယ်လဲဟ "
" ဒီနေ့ ကလေးတွေကို ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်ကျွေးမလို့၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်သွားခူးမလို့ ယောက်ဖရေ "
ဒီနေ့ ကလေးတွေအတွက် ငါးခြောက်ဖုတ်ဆီဆမ်းနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထွက်ရှာရင်း ရွာထဲက စောဂျော်နီတို့အိမ်ရှေ့အရောက် အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်ဖြစ်တာပါ။
ဒီရွာမှာ လူတိုင်း ဖော်ရွေတယ်။ ရိုးသားပွင့်လင်းတယ်။ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းတယ်။ ဧည့်သည်ကို ခင်တတ်မင်တတ်ပြီး ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်တတ်ကြပါတယ်။
အတော်များများက "ကာတွန်းဆရာ" လို့ ခေါ်ကြပြီး စောဂျော်နီကတော့ " ယောက်ဖ " လို့ပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်လာတာ ဒီရွာကိုရောက်တဲ့ ဟိုးဘက်လတည်းကပါပဲ။
သူနဲ့ကျနော်က မွေးနစ်မွေးလ သွားတူနေတယ်။ ရွယ်တူ။ ကျနော့်ကို "ယောက်ဖ" လို့ ခေါ်တော့ ကျနော်ကလည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပဲ "ယောက်ဖ" လို့ ပြန်ခေါ်လာလိုက်တာပေါ့။
သူ့နှမကို ကိုယ်ကယူယူ ကိုယ့်နှမကို သူကယူယူ "ယောက်ဖ" လို့ သုံးကြပါတယ်။ အပြင်မှာ တကယ်မပေးကြမယူကြပေမယ့်လည်း ချစ်စနိုးနဲ့ ခင်မင်စိတ်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနီး အဲသလိုမျိုး"ယောက်ဖ" လို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကြားမှာ သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်တတ်ကြပါတယ်။
ဗမာစကားအသုံးတွေဟာ ဝေါဟာရ သိပ်ကြွယ်ဝတယ်။ စောဂျော်နီနဲ့ ရေနွေးထိုင်သောက်ရင်း "ဆွေမျိုးစပ်" ဝေါဟာရတွေဆီကို ရောက်သွားတယ်။ ယောက်ဖ၊ ယောက္ခမ၊ ခယ်မ၊ မရီး၊ မတ်၊ သား၊ သမီး၊ မြေး၊ တစ်ဝမ်းကွဲ၊ မယားညီအစ်ကို၊ လင်ညီအစ်မ . . . . . . စုံလို့ပါပဲခင်ဗျ။
စောဂျော်နီအိမ်မှာ စာအုပ်ဘီရိုနဲ့။ စာလည်းအတော်ဖတ်တယ်။ စကားပြောလည်း ရွှင်တယ်။
တခါတခါ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေလည်း ဆွေးနွေးတတ်ပါသေးသဗျ။ သူ့အိမ် TV မှာလာနေတဲ့အမေရိကန်ပြန် မျက်နှာရူး " မဟ " ကိုမြင်တော့ "ယောက်ဖ သူ့ဂျာနယ်မှာ ရေးဘူးလား" တဲ့ မေးပါတယ်။
"မပို့ဘူး မရေးဘူးပေမယ့် ငါ့စာမူတွေ အတော်ကလေး " ပါဘူးတယ် " ယောက်ဖရဲ့" သူ့ဂျာနယ်ကို ဘာစာမူမှ မပို့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာမကြာ ပါပါလာတတ်တယ်။ ဒင်းက အခြားမီဒီယာတွေမှာပါတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ခပ်စပ်စပ်ကာတွန်းတွေကို ခပ်စပ်စပ်သရော်စာတွေကိုကျနော်တို့ကို လုံးဝအသိမပေးဘဲ သူ့ဂျာ နယ်တွေမှာ ပြန်ပြန်သုံးတယ်ခင်ဗျ။ အဲသလို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးမပြုဖို့လှမ်းလှမ်းတားလည်း ဂရုကိုမစိုက်ဘဲ ထပ်ထပ်သုံးနေတာပဲ။
သူ့ဂျာနယ်သွားတဲ့ "လမ်းကြောင်း" ကို မကြိုက်လို့ မရေးတဲ့ဟာကို ဒီကောင်က အဲသလိုမျိုး ဘလိုင်းကြီး ယူယူသုံးတာမခံချင်လို့ လှမ်းလှမ်းကြောင်းကြားတော့ "သံစျေးက ဂျာနယ်ရုံးခန်းမှာ စာမူခတွေ လာထုတ်လေဗျာ" တဲ့။ အဲသလိုကောင်။ ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ မဆက်ဆံချင်လို့ ကျနော်တော့ တစ်ခါမှ သွားမထုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒင်းဆီမှာ "အကြွေး" တော်တော်များများ ရှိတယ်။
"ဒီကောင် "မအလမဟ" က ဒီလိုလူစားကိုး"
ဒါနဲ့ စကားဆက်ဖြစ်သွားတယ်။ စောဂျော်နီက ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က "မဟအကြောင်းတွေ" ကိုဖတ်ပြီးသားဆိုတော့ အဲသည်အကြောင်းတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဆက်ပြောဖြစ်ကြပါတယ် ခင်ဗျ။
" "မဟ" က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လိုလို၊ နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်လိုလို၊ ဆရာကြီးလိုလိုသမ႓ာကြီးယောင်ယောင်နဲ့။ ဒါနဲ့ ဒီကောင်က သူ့အစ်ကို့သမီး သူ့တူမအရင်းကို ပြန်ယူထားတယ်လို့ "ဖော်" ထားတာ တွေ့ရတယ်ဟယောက်ဖရ "
" အဲဒါ ဖတ်ရတယ် ယောက်ဖရဲ့ "
" ဒါ အမှန်ဆိုရင်တော့ အဲသည်ကောင် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဆွေမျိုးတော်စပ်မှုတွေဟာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖြာထွက်လာနိုင်တယ် ယောက်ဖရဲ့"
" ဘယ်လိုတွေများလဲ ယောက်ဖရာ "
သူ ဆွေမျိုးစပ်ပြတာတွေကို နားထောင်ရင်းပြုံးမိရယ်မိတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ ခင်ဗျ။ ဒီလိုတွေ။
"မဟရဲ့ အစ်ကိုရဲ့သမီးလေးဟာ ဒီကောင့်ရဲ့ "တူမအရင်း" ဖြစ်ပြီး အခုကျတော့ "မယားငယ်" ဖြစ်နေပြန်ရော။ အဲသည်တော့ သူ့ရဲ့ "အစ်ကိုအရင်း" ဟာ အခု သူ့ရဲ့ "ယောက္ခမ" ဖြစ်လာတယ်။ သူ့အစ်ကိုရဲ့မိန်းမဟာလည်း အရင်က သူ့ရဲ့"မရီး" တော်ရာကနေ အခုကျတော့ သူ့ရဲ့"ယောက္ခမ" ဖြစ်လာပြန်တယ် "
" သူ့တူမရဲ့မောင်ဟာ နဂိုက သူ့ရဲ့ "တူအရင်း" ဖြစ်ပေမယ့် အခုကျတော့ "ယောက်ဖ" ဖြစ်လာတယ်။ သူ့အစ်ကိုရဲ့ကလေးတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ကလေးတွေဟာ နဂိုက "မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲ" ကနေ အခုကျတော့ သူ့ "တူမ မယားငယ်" ဟာ သူ့ကလေးတွေရဲ့ "မိထွေး" ဖြစ်လာပြန်တယ် "
"မဟအဖေအမေတွေရဲ့နဂိုက "မြေးမ" ဟာ အခုကျတော့ "ချွေးမ" ဖြစ်လာပြန်တယ်။ သူနဲ့ အခု သူ့ "တူမ" တဖြစ်လည်း "မယားငယ်" နဲ့က မွေးတဲ့သားဟာ သူ့ရဲ့ "သား" ဖြစ်သလိုပဲ "မြေး" လည်း ဖြစ်နေပြန်တယ်။ အဲသည်ကလေးဟာ သူ့မယားကြီးကမွေးတဲ့ သူ့ကလေးတွေနဲ့ "ဖအေတူ မအေကွဲ" တော်သလို "တူ" လည်း တော်နေပြန်ရော ယောက်ဖရဲ့ . . . ဟားဟားဟားဟား ဟားဟားဟားဟား . . . "
" ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟားဟား . . . "
ယောက်ဖကား ရယ်မောလို့ မဆုံးတော့။ သူနှင့်လိုက်၍ ကျွန်ုပ်မှာလည်း အရယ်ကြီးရယ်မိသွားကာ ခေတ်ဆိုးကြီးကို ခေတ္တခဏ မေ့သွားကြောင်းပါ မိတ် ဆွေတို့ ခင်ဗျား ။ ။
(Wed) 11:31 PM
ဆာသော်ဒိုး - ဆွေမျိုးစပ်ခြင်း Reviewed by k on 11:36 AM Rating: 5
ကာတွန်း ဘီရုမာ - ပေါက်ဖော်ကြီး ဖော်တဲ့ဆေး